ပြင်ဆင်ခြင်း အနုပညာ | အရှင် ဉာဏိကာဘိဝံသ | Burma Today - Articles
အရှင် ဉာဏိကာဘိဝံသ၊ မေ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၂
ရုပ်ကုိုသာ ပြင် စိတ် မပြင်
ရုပ်သွင်သာ လှ စိတ် မလှ
စိတ်ကုိုလည်း ပြင် ရုပ်လည်း ပြင်
ပြင်ဆင်တုိုင်းရ ပြုတုိုင်း လှ
1.	Children and teenagers
3.	Elderly people
ကလေးအရွယ်နဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တို့မှာ ခွန်အားတွေ ရှိတယ်၊ အချိန်လည်း ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ငွေတော့ မရှိဘူး။
သက်လတ်များမှာတော့ ခွန်အား ရှိတယ်၊ ငွေ ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အချိန် မရှိဘူး။ (နှစ်ဆယ်ကျော်စ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ချိန်ကစပြီး ပင်စင်စားချိန် ခြောက်ဆယ့်ငါးဝန်းကျင်လောက် အရွယ်များလို့ အကြမ်းစား သတ်မှတ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။)
သက်ကြီးရွယ်အိုများမှာတော့ ငွေ ရှိတယ်၊ အချိန် ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အားအင်တော့ မရှိကြတော့ဘူး - တဲ့။
အီးမေးလ်ကနေ ရောက်လာတဲ့ ဒီစာလေးက အများစုသောသူတွေရဲ့ဘဝနဲ့ ထပ်တူဖြစ်မယ့်စာလေးပဲဆိုပြီး နှစ်သက် သဘောကျမိတယ်။ နောက်ပြီး ဘဝဆုိုတာ ပြည့်စုံတယ်ရယ်လုို့ မရှိဘူး။ လုိုအပ်ချက်တခုတော့ အမြဲ ရှိနေတာပဲလို့ ပြောလုိုတာများ ဖြစ်လေမလားလို့လည်း တွေးမိတယ်။
ခွန်အားတွေ အချိန်တွေ ရှိပေမယ့်လည်း ငွေ မရှိလျှင်ဖြင့် ဘာမှလုပ်လို့ မဖြစ်နုိုင်ဘူးဆုိုတဲ့ ကလေးငယ်ဘဝကုို ညွှန်းပြီး ငွေရဲ့တန်ဖိုးကြီးမှုကုို မီးမောင်းထိုးပြလုိုိတာလား။ ခွန်အားတွေ ငွေကြေးတွေ ရှိပေမယ့်လည်း များပြား လွန်းလှတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေကြားမှာ ရှားပါးလွန်းလှတဲ့ အချိန်ပြဿနာကြောင့် ရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့ ငွေကြေးကိုတောင် စနစ်တကျ မသုံးနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်ကာလရဲ့ လူမှုဘဝ သရုပ်သဏ္ဌာန်ကုို ညွန်ပြ လိုတာလား။ အချိန်တွေ ငွေတွေ ရှိပေမယ့်လည်း ကုိုယ့်ခြေကုိုယ့်လက်ကိုမှ မသယ်နိုင်လောက်အောင် အားအင် ချည့်နဲ့နေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုဘဝကုို မီးမောင်ထိုးပြပြီး သတိ သံဝေ ယူစေချင်လုို့များ ဒီစာလေးကုို ရေးပြလိုက်တာလေလား။ တကယ့် အဖြေမှန်ကုိုတော့ ဒီစာလေးကုို ရေးလိုက်တဲ့သူကုိုယ်တိုင်မှသာလျှင်ပဲ သိပေလိမ့်မယ်။
စာလေးကို ဖတ်မိပြီး ဒီစာလေးက ပြောပြတဲ့အကြောင်းနဲ့ ကုိုယ့်ဘဝကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိတယ်။ လက်ရှိ ပျမ်းမျှ လူ့သက်တမ်းအရဆိုလျှင် ကုိုယ့်အသက်က နံပတ် ၂ အဆင့်မှာပါတယ်လို့ ပြောရမယ့် အရွယ်။ ခွန်အား ရှိတယ်၊ ငွေ ရှိတယ်၊ အချိန် မရှိဘူးဆိုတဲ့ အရွယ်ထဲမှာ ပေါ့။ သုို့ပေမယ့် ကုိုယ့်ဘဝရဲ့ပုံစံကုိုက သာမန်လူသားတွေလုို လောကီဘဝထဲမှာ နေထိုင်ပြီး လောကလူမှုတာဝန်တွေနဲ့ လုံးထွေးနေတဲ့ ပုံစံမဟုတ်လို့ အထက်က စာထဲကလုို အရွယ်သုံးပါးရဲ့ ဒုတိယအဆင့်းမျိုးနဲ့ ထပ်တူအကျကြီးတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်း ထပ်တူကျလုို့လည်း သင့်တော်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။
ကုိုယ်က စာထဲကလုို Have energy - အင်အားအပြည့်အဝ ရှိတဲ့ အားကောင်းမောင်းသန်တဦးလုို့ မဆုိုနုိုင်လျှင်တောင် လုပ်နုိုင်ကုိုင်နုိုင်တဲ့ ခွန်အားတော့ အတော်အတန် ရှိတယ်။ ဒီတော့ ဒီအချက် ရာနှုန်းပြည့် မဟုတ်တောင် ရာခုိုင်နှုန်း ရှစ်ဆယ်ကျော် ကုိုးဆယ်လောက် မှန်တယ်လုို့ ပြောနုိုင်တယ်။ ဒုတိယအရွယ်မှာ Have money - တဲ့။ သီးသန့်ဝင်ငွေရအောင် ရှာဖွေနေသူတဦး မဟုတ်လုို့ ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူတဦးတော့ မဟုတ်ဘူး။ သုို့ပေမယ့် အားပေးထောက်ပံ့သူများရဲ့ စေတနာစွမ်းအားကြောင့် ကိုယ် လုပ်ချင်တဲ့အရာ၊ ဝါသနာပါတဲ့အရာ နည်းနည်းပါးပါးကုို လုပ်နိုင်လောက်အောင်တော့ ပြေလည်သူတဦးလို့ ဆုိုနုိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီအချက်လည်း ခုနစ်ဆယ့်ငါးရာနှုန်းလောက် မှန်တယ်လို့ ပြောနုိုင်မယ် ထင်တယ်။
But no time – အချိန်မရှိဘူးလုို့ ဆုိုရအောင်တော့ busy - နေသူ၊ အလုပ်ရှုပ်နေသူတဦးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တခါတလေ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ တချိန်တည်းမှာ လုပ်ကုိုင်ရမည့် အလုပ်နှစ်မျိုး၊ သုံးမျိုးရှိတတ်တာကလွဲလုို့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ် ဆုိုတာမျိုး မရှိတတ်ပါဘူး။ အလုပ် မရှုပ်သလုို အရှုပ် မလုပ်ဖြစ်အောင်လည်း ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ကြိုး စားနေတတ်တာကြောင့်လည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နုိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် But no time -ဆိုတဲ့ ဒီအချက်ကတော့ ကုိုယ်နဲ့ကုိုက်တယ်လုို့ ဆုိုနုိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ ပြောရလျင် တခုခုကုို လုပ်လိုလျှင်ဖြင့် လုပ်ခွင့်သာလောက်အောင် အချိန် လုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်လုို့ ပြောနုိုင်ပါတယ်။
Have energy - ခွန်အားရှိတဲ့ အရွယ် ။ ကျန်းမာရေးကလည်း စင်းလုံးချော အကောင်းချည်း မဆုိုသာတောင် နာမကျန်းဖြစ်နေသူ တဦးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ရှိနေတဲ့ ကာယခွန်အား၊ ဉာဏခွန်အား၊ ဒီခွန်အားတွေကုို ကုိုယ့်အတွက် အများအတွက် အကျိုးဖြစ်မည့်အရာတွေမှာ အသုံးချတတ်ဖို့ လိုပေလိမ့်မယ်။ ခွန်အားတွေ ရှိပါလျက်ကယ်နဲ့ ရှိနေတဲ့ခွန်အားကုို အသုံးမချပါပဲ ဘဝရဲ့တတိယအရွယ်လုို့ပြောရမယ့် ခွန်အားမဲ့အရွယ် ရောက်သွားမယ်ဆုိုလျင် အတော်ပင် ဝမ်းနည်းဖွယ် ကောင်းပေလိမ့်မယ်။ ရှိနေတဲ့ ကုိုယ်ပုိုင်ခွန်အားတွေ ဆုိုတာက ကုိုယ် အသုံးချသည်ဖြစ်စေ၊ အသုံးမချပဲ နေသည်ပဲဖြစ်စေ၊ သက်ကြီးရွယ်အုိုဖြစ်တဲ့ တတိယအရွယ်အထိ ပါလာနိုင်မှာမျိုးမှ မဟုတ်တာ။ ပါလာနိုင်တယ် ဆိုစေဦး။ တတိယအရွယ်အထိ ကုိုယ့်သက်တမ်းက ရှည်ချင်မှလည်း ရှည်နုိုင်မှာ။ ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၊ ကိုယ့်အသိထဲမှာ ကိုယ့်အောက် ငယ်ရွယ်သူတွေ၊ ကိုယ်နဲ့ တန်းတူရွယ်တူတွေ၊ ကိုယ့်ထက် အနည်းငယ်မျှလောက်သာပဲ ကြီးရင့်သူတွေ သေဆုံးသွားခဲ့ကြတာ နည်းတာမှ မဟုတ်တော့တာ။ ကိုယ့်အလှည့် ဘယ်တော့ ရောက်လာမယ်ဆုိုတာ ကုိုယ်ကိုယ်တိုင် ကြိုတင် သိနိုင်တာမျိုးမှလည်း မဟုတ်တာ။
ခွန်အားဆိုတာမျိုးက ကုိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှုကို အခြေခံပြီးမှ ရလာနုိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးရလဒ်မျိုး မဟုတ်လား။ ကုိုယ် ကျန်းမာရေး ဖောက်ပြန်လုို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ကျန်းမာရေး မဟန်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခုက ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုလျင်ဖြင့် ဘယ်မှာလာလုို့ ခွန်အားပြည့်သူ၊ ခွန်အားရှိသူတဦးလုို့ ဆိုနုိုင်ပါတော့မလဲ။ ဒါကြောင့် ကုိုယ်ခွန်အား စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ပြည့်ဝကောင်းမွန်သူတဦး ဖြစ်စေဖုို့ ခွန်အားပြည့်မည့်အရာတွေကုို လုပ်ဖုို့ လိုပေလိမ့်မယ်။ ကုိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖုို့ ပြုပြင်ရမည့်အရာတွေ ပြုပြင်ဖုို့ လိုပေလိမ့်မယ်။ အကျိုးရလဒ်တွေ ကောင်းစေဖုို့ အကြောင်းတရားတွေကုို ကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖုို့ လုိုပေလိမ့်မယ်။
ကုိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆုိုတာ ကံရယ်၊ စိတ်ရယ်၊ ရာသီဥတုရယ်၊ အစာအဟာရရယ်ကုို အကြောင်းခံပြီး ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတယ်။ အကျိုးရလဒ် ဖြစ်တဲ့တရားတွေ ကောင်းလာစေဖုို့၊ ရုပ်ကောင်း နာမ်ကောင်းတွေ ဖြစ်စေဖုို့၊ ကုိုယ်လည်း ကျန်းမာ၊ စိတ်လည်း ချမ်းသာဖြစ်နုိုင်စေဖုို့ ကံတွေ ကောင်းအောင်၊ စိတ်ဓာတ်တွေ ကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ရာသီဥတုအညီ သင့်တင့် မျှတအောင် နေထုိုင်ဖုို့၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းကောင်း ဖြစ်စေမယ့် အစာအဟာရတွေကုို ရွေးချယ်ကာ စားသောက်ဖို့ လိုပေလိမ့်မယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပါ။ အရွယ်သုံးပါးထဲမှာ ဒုတိယအရွယ်မှာက အချိန်မရှိဘူး ဆုိုပေမယ့် ရွေးချယ်နုိုင်ခွင့်များတဲ့ အရွယ်၊ လုပ်နုိုင်စွမ်းအားတွေ အကောင်းဆုံးအရွယ်ပဲ မဟုတ်လား။ ကလေးနဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာက သူ တုို့မှာ မရှိတဲ့ငွေကြေးကုို ရှိလာအောင် ဖန်တီးဖုို့ အခွင့်အလမ်းက အလွန်နည်းပါးပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အုိုတွေ မှာလည်း သူတုို့မှာ မရှိနုိုင်တော့တဲ့ ခွန်အားကုို ခွန်အားပြည့်ဝသူတစ်ဦးဖြစ်လာနုိုင်စေဖုို့ ဖန်တီးလုို့ မရနုိုင်တော့ ပါဘူး။ သက်လတ်တွေမှာက အချိန်မရှိဘူးဆုိုပေမယ့် အဲဒီအချိန်ကုို စနစ်တကျ စီမံဖန်တီးကာ အရယူမယ်ဆုို လျင် ရနုိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်း ရှိပါတယ်။
ပထမအရွယ်ဖြစ်တဲ့ ကလေးငယ်တွေ၊ ဆယ်ကျော်သက်တွေ ငွေကြေး မရှိလုို့၊ ချို့တဲ့နွမ်းပါးလုို့ သူတုို့ဘဝ တက်လမ်း ပိတ်ဆုို့နေတယ်ဆိုလျှင် အဲဒီ အပိတ်အဆုို့ အတားအဆီးကို ဖယ်ရှားနုိုင်အောင်၊ သူတို့တွေ လျှောက်လှမ်းကြတဲ့ လမ်းကြမ်းကြမ်းတွေ ချောမွေ့သာယာ ဖြစ်လာစေအောင် အားပေး ထောက်ပံ့ လုပ်ကြရမယ် မဟုတ်လား။ အလားတူပါ ပဲ၊ ခွန်အားမရှိတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အုိုတွေ၊ ကုိုယ့်ခြေကုိုမှ ကုိုယ် မ,မနုိုင်၊ ကုိုယ့်လက်ကုိုယ်မှ ကုိုယ် မချီနုိုင်ကြတဲ့ အနေမျိုးမှာ ကုိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ ခွန်အားအချို့ကုို သူတို့တွေအတွက် မျှတ ခွဲဝေပြီး ဇရာအိုများရဲ့ နေညိုချိန်ကုို ထိန်လင်း ဝင်းပ သာယာအောင်၊ ငြိမ်းအေး ချမ်းမြေ့ လှပအောင် လုပ်ဆောင်ပေးဖုို့ လုိုတယ် မဟုတ်လား။
မရောက်တာကြာတဲ့ မွေးရပ်မြေကုို အလည်ပြန်တော့ ငယ်ဆရာတော်က ရွာပြန်လာတဲ့ သူ့တပည့်ကုို မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ကြိုဆုိုပွဲ လုပ်ပါတယ်။ ဆုိုင်ကယ်နဲ့ ရွာသားလေးငါးဆယ်လောက်က ငါးမုိုင်ခန့် ဝေးကွာတဲ့ မြို့ငယ်လေးအထိ အရောက်လာပြီး ကြိုဆိုကြတယ်။ လမ်းလျှောက်နုိုင်တဲ့ ကလေးငယ်များနဲ့ သက်လတ်အရွယ် တရာကျော်ခန့်ကတော့ တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ လမ်းဆုံတခုအထိ အရောက်လာပြီး ရွာပြန်ကုိုယ်တော်ကြီးကုို လာကြိုကြတယ်။
ကုိုယ်တော်ကြီးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ညွန်းရတာက လာရောက် ကြိုဆုိုကြတဲ့ ဒီ ရာကျော်မျှလောက်သူတွေထဲမှာ ကုိုယ့်ကုိုယ်တခါမှ မတွေ့မမြင်ဘူးတဲ့ လူငယ်တွေက ပိုများမှာမုို့ နာမည်လောက်သာ သူတုို့တွေ ကြားဖူးနေတဲ့ အမေရိကန်ပြန် ကုိုယ်တော်ကြီးဆိုတာ ဘယ်လိုများ နေလေမလဲလုို့ ဦးဦးဖျားဖျား စူးစမ်းလိုလုို့ အကြိုရောက် လာကြတာဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းမိလုို့ ပါ။
ရွာဦးထိပ်မှာတော့ တရွာလုံးမှာရှိတဲ့ လူစုံတက်စုံထွက်လို့ ပြည်တော်ပြန်ရွာသားကုို ဒုိုးပတ်ဝုိုင်းတွေ ဆင်အက တွေနဲ့ မြိုင်မြိုင်ဆုိုင်ဆုိုင် ကြိုဆုိုကြတယ်။ ဒီအထဲမှာ အသက်ကုိုးဆယ်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ ကုိုယ့်အမေရဲ့ အမေ၊ ကုိုယ့်အဖွား (ကိုယ့်အရပ်အခေါ် အမေကြီး) လည်း ပါ ပါတယ်။ ကုိုယ့်အဖွားက သာမန်အချိန်များမှာဆို သူ့အိမ်ထဲကနေ ဘယ်ကုိုမှ မထွက်တော့ဘူး တဲ့။ သုို့ပေမယ့် အဝေးကနေ သူ့မြေးပြန်လာတယ်ဆုိုတော့ ရွာဦးထိပ်အထိ မမောပန်းနိုင်စွာ ကြိုးစားပြီး လာရောက် ကြိုဆုိုရှာတယ်။
သူတုို့မသေမီမှာ ကုိုယ့်ကုိုယ် တခါလောက်တော့ တွေ့ချင်ပါသေးတယ်လုို့ ပြောခဲ့ကြတဲ့ ကုိုယ့်ရဲ့ ငယ်ဆရာ ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့ ကုိုယ့်ရဲ့အဘုိုးဖြစ်သူ ဦးဇင်းကြီးတုို့လည်း သက်တော်ကုိုးဆယ်အရွယ်များမှာ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ကြတယ်။ သူတုို့ဆန္ဒ ပြည့်ဝသွားအောင်တော့ ကုိုယ်က မဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
သူတုို့လိုပဲ မသေမီ ကိုယ့်ကုိုယ် တခါလောက်တော့ တွေ့လိုပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်အမေကြီးရဲ့ဆန္ဒကုိုတော့ ကုိုယ်က ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီ။ အမေကြီး ခုပုံဆုို ဇာတာထဲကလုိုပဲ အသက်တရာ့နှစ်ဆယ်ရှည်ဦးမှာလုို့ ကုိုယ်က ပြောတော့ မြေး သိကြားမင်းရှိနေမှတော့ ရှည်ဦးမှာပေါ့လုို့ အဖွားက ပြန် ပြောတယ်။ အဖွား ရည်ရွယ်တဲ့စကားကို ကုိုယ်က ကောင်းကောင်း နားလည်ခဲ့တော့ သူ့အတွက် ခွန်အားဖြစ်စေမည့်အရာအချို့ကုို ပြုလုပ် ပေးနုိုင်ခဲ့တဲ့ ကုိုယ့်လုပ်ရပ်အတွက် ကျေနပ်မိကာ ကြည်နူးဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်။ အဖွားရဲ့နားနဲ့မျက်စိက သူ့သမီးဖြစ်တဲ့ ကုိုယ့်အမေထက်တောင် ပုို ကောင်းနေပါသေးတယ်။ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကုသိုလ်ကံတရားက မတူကွဲပြား တတ်ကြတာ သဘာဝပဲ လေ။
ဒီစာလေးကို အသက်ကိုးဆယ်အရွယ် ရွာက အမေကြီးအတွက် အမှတ်တရ ရည်ရွယ်ကာ ရေးလိုက်တာပါ။ ကိုယ့်အမေကြီးလိုပဲ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်တဲ့ သင့်မိဘနဲ့ သင့် အဖိုးအဖွားတွေ၊ သင့် ဆွေမျိုး သက်ကြီးရွယ်အုိုတွေ၊ ဆွေမျိုး မဟုတ်သော်လည်း သင့် အကူအညီကုို လုိုနေမယ့်သူတွေ သင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ရှိကောင်း ရှိနုိုင်မှာပါ။ သင့်ရဲ့ ခွန်အား၊ သင့်ရဲ့ ငွေကြေး၊ သင့်ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး အချိန်ထဲက အနည်းငယ်မျှလောက်ပင် ဖြစ်စေဦး၊ သူတုို့အတွက် မျှတ ခွဲဝေပေးခဲ့မယ်ဆိုလျှင် သူတို့ လိုနေတဲ့ခွန်အားကုို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားနိုင်မှာပါ။ ဒါဟာ သင့်ကံကို ကောင်းအောင် ပြုပြင်ခြင်း၊ သင့်စိတ်ကုို ကောင်းအောင် ပြုပြင်ခြင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုလည်းပဲ ဖြစ်သွားမှာပါ။ ။
အတွေးအမြင် - ပြင်ဆင်ခြင်း အနုပညာ အရှင် ဉာဏိကာဘိဝံသ - May 28 2012 10:47 PM EST
အရှင် ဉာဏိကာဘိဝံသ ရဲ့ ဆောင်းပါးများ